အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ပြမြူနီစီပယ် RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
Istanbul Metro အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆု
Istanbul Metro မှနိုင်ငံတကာဆု၊ Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro သည် Istanbul Metropolitan Municipality မှတည်ဆောက်ခဲ့သောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဗိသုကာပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် AEC Excellence Awards တွင်“ Infrastructure Design” အမျိုးအစားတွင်ပထမဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ ဆုအခမ်းအနား [ပို ... ]
သမိုင်းဝင်Paşabahçeကူးတို့ဒီဇင်ဘာလတွင်Haliçသို့သယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့သည် Beykoz ကမ်းရိုးတန်းတွင်သင်တုန်းဓားသွားသည်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်၊ Istanbul Metropolitan Municipality ၏ပဏာမခြေလှမ်းဖြင့် City Lines သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သောသမိုင်းဝင်Paşabahçeကူးတို့သည်ဒီဇင်ဘာလတွင်Haliçသင်္ဘောကျင်းသို့သယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်မည်ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
Istanbul နောက်ဆုံးလမ်းကြောင်း Channel
Kanal İstanbulနောက်ဆုံးလမ်းကြောင်း - Kanal İstanbulစီမံကိန်းသည်Yeniköyမှစတင်လိမ့်မည်၊ Sazlıdereဆည်နောက်ဆက်တွဲနှင့်Küçükçekmeceရေကန်မှ Marmara နှင့်တွေ့ဆုံလိမ့်မည်။ လမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလများကိုဘာသာစကားမှဘာသာစကားသို့လပေါင်းများစွာဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည့် Istanbul Channel သည်အတိအကျလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
Kadikoy ဗိုလ်ချုပ် forahap Gürlerလမ်းသည် IETT ဘတ်စ်ကားများအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းများကြောင့်လမ်းမပေါ်အလုပ်စတင်ခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်လူမျိုးများအားအပျက်သဘောမသက်ရောက်စေရန်တားဆီးမှုအသစ်ပြုလုပ်ရန်Ayrılıkçeşmesiဘူတာသို့မှတ်တိုင်အသစ်များထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။ [ပို ... ]
သမိုင်းဝင်Paşabahçeကူးတို့ Bosphorus သို့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည်
Beykoz ကမ်းရိုးတန်းတွင်သင်တုန်းရောက်နေရန်စောင့်ဆိုင်းနေသောသမိုင်းဝင်Paşabahçeကူးတို့သည် IMM ၏ပဏာမခြေလှမ်းဖြင့် Bosphorus နှင့်ထပ်မံတွေ့ဆုံလိမ့်မည်။ 10 ဘေကော့စ်မြူနီစီပယ်အား Istanbul Metropolitan Municipality မှလှူဒါန်းခဲ့သောကူးတို့အားŞehirHatları A.Ş. မှပြန်လည်တပ်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Kadikoy Ibrahimaga တံတားကျဆင်းနေသည်!5မွန်းလမ်းလျှောက်သူ၊ Kadikoy ရှိ Ibrahimaga တံတားကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံသည့်အနေဖြင့် Istanbul Metropolitan Municipality သည်ဖြိုဖျက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုစတင်ခဲ့သည်။ Ibrahimaga တံတားကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်5သို့လများကြာမည်။ İstanbulKadıköyခရိုင် [ပို ... ]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kent genelinde üzeri yeşil alan olan modern ve katlı otoparkları hayata geçirmeye devam ediyor. İSPARK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 170 araçlık Bağcılar Göztepe Zemin Altı [ပို ... ]
BBB အရေးယူခဲ့သည် .. ! Metro စီမံကိန်းများမှအန္တရာယ်များကိုကာကွယ်ခြင်း
စီးပွားရေးအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများရပ်တန့်သွားသောမက်ထရိုစီမံကိန်းများအတွက် IMM ကဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ မီးရထားစနစ်များလက်ထောက် IMM ဌာနမှူး။ ဒေါက်တာ Pelin Alpkökin, လက်ရှိပြည်နယ်အတွက်အန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါစီမံကိန်းများကို secure ရန် [ပို ... ]
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda (Büyük İstanbul Otogarı) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metruk ve tehlike arz eden binaların yıkımı ve temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın (Büyük İstanbul Otogarı) mülk [ပို ... ]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Karaburun’dan Kilyos’a kadar, İstanbul’un tüm kıyılarını kameralarla izliyor. Tespit edilen kirlilik anında temizleniyor. Kıyılar haricinde kalan deniz yüzeyinde de 7/24 denetim ve temizlik yapılıyor. 2019 yılı içinde [ပို ... ]
Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ဘူတာareasရိယာများလုပ်ကိုင်ရန်တင်ဒါတင်သွင်းမှုမှ Istanbul Metropolitan မြူနီစီပယ်တွဲဖက်အဖွဲ့များကိုတရားမ ၀ င်ဖျက်သိမ်းမှု၏အကျိုးဆက်များကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစဉ် IMM ၏ CHP ပါလီမန်အမတ်Süleyman Solmaz ကလုပ်ငန်းစဉ်သည် [ပို ... ]
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (352) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (582) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)